‘म ज्ञानी बन्ने थिएँ मलाई राम्रो शिक्षा लिने अवसर नै भएन !’ म ठूलो धनी बन्ने थिएँ । तर मलाई समयले साथ दिएन ! म प्रथम हुने नै थिएँ तर निर्णायकहरूले सही निर्णय दिएनन् । जब अङ्गुर टिप्न सकिँदैन तब आफ्नो खुबीलाई भन्दा अङ्गुरलाई नै दोष लगाएएर अङ्गुर अमिलो छ’ भन्ने यस्ता उक्त्तिहरूले मनलाई केहीबेर सान्त्वना दिए पनि यी स्थायी सन्तोष भने पक्कै होइनन् ।
अरूको नजरमा म कमसल होइन भनेर देखाउन केही राहत मिले पनि मनको गहिरो असन्तुष्टिलाई यसले बिराम दिन सक्दैन । अगाडि बढ्न र खुसी रहन चाहनेले सधैँ असफलतमा आफ्नो कमजोरी केलाएर अर्को पटक त्यसलाई नदोहोर्याउने प्रयास गर्छ । तर आफ्नो असफलताको कारण अरूमा खोज्नेहरू आफैँ दुखी त हुन्छन् नै तर अरूको पनि दुखको कारण बन्छन् ।
यसैले होला भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपिजे अब्दुल कलामका शब्दमा ‘वर्षा हुँदा सबै चराहरू, वादल र प्रकृतिलाई दोष दिँदै कहीँ न कहीँ ओत खोज्छन्, तर चिल भने बादल भन्दा माथि उडेर पानी को वर्षाबाट जोगिन्छ ।’
हरेक मानिसमा बुद्ध बन्ने क्षमता निहित हुन सक्छ । तर संयम जसले गुमाउँछ, त्यो अदम्य उपलब्धिबाट टाढा रहन्छ । जसले संयम गुमाउँछ उसले आफैँभित्रको बुद्धत्व पनि समाप्त पार्छ । धेरै जसो विज्ञहरू भन्छन् खुसी र सुखी हुन अरू केही चाहिन्न बरू चाहिन्छ एउटा सुन्दर सपना ! डा. विकासानन्द योगीको शब्दलाई सापट लिँदा देश र मानिस धनी बन्न एउटा मजबुत सपना चाहिन्छ । समस्या सपना नदेख्नु होइन । समस्या त सपना देख्न नखोज्नु नै हो ।
यहाँं सपनाको प्रसङ्गमा एउटा सानो बालक एकदमै गरिब झुपडीमा बस्थ्यो । एक दिन स्कुलमा टिचरले उसलाई लेख लेख्नको लागि भन्यो र त्यो लेखको शिर्षक थियो ‘मेरो सपना ।’ बच्चा झुपडीमा बस्नुको बाबजुद उनले यस्तो सपना लेख्यो ‘म पचास वटा घोडा किन्नेछु अरब देशबाट, दस करोडको महल बनाउँछु त्यसमा स्वीमिङ्ग पुल हुन्छ र घोडाहरुको लागि अलग स्वीमिङ्ग पुन हुनेछ । सात वटा विभागमा फ्याक्ट्री खोल्छु ।’
यस्तै गरेर उनले सात आठ वटा सपनाको बारेमा लेख लेख्यो र टिचर भएको ठाउँमा गयो । टिचरले लेख देख्यो र भन्यो ‘लेख त एकदमै राम्रो छ तर जुन माहोलमा, परिवारमा तिमी बस्छौ त्यो माहोलको हिसाबले यो सपना पूरा हुन सक्दैन बरु तिमी एउटा काम गर, यो लेखलाई बदलिदेउ र यस्तो सपना लेख कि म एक सानो तिनो एउटा फ्लाट बनाउछु, एक टिभी लिनेछु जसमा एन्टिना घुमाउँदै रहनेछु, एउटा सानो पोखरी बनाउँछु, यस्तै यस्तै पाँच दश वटा सपना बनाइहाल ।’
बच्चा आफ्नो घर गयो र आफ्नो आमा जो अरुको घरमा भाँडा माझ्ने, लुगा धुने काम गर्छिन्, उनलाई भन्यो, ‘आमा मैले एउटा लेख बनाएको थिएँ, जसमा पचास वटा घोडा, दश करोडको महल, त्यसमा स्वीमिङ्ग पुल अलग्गै, मेरो स्वीमिङ्ग पुल अलग्गै, घोडाको अलग्गै । एउटा कार चाहिन्छ तर टिचरले भन्नुभयो यो सपना बदलिदेउ र यो बनाउ । यो मेरो दिलले स्वीकार गरेन तपाइँको के सल्लाह छ ? तपाइको के बिचार छ ?’ यो सपनाको कथाले ती बालकलाई सपनाले अब उसलाई कतातिर लैजाला त ?
अनपढ आमा कपडा धुन्छिन्, भाँडाकुडा साफ गर्छिन्, उसको आमाले भनिन् ‘छोरा यदी तँलाई आफ्नो सपनामा विश्वास छ भने यो लेख कहिल्यै नबदल्नु । चाहे तँलाई त्यो टिचरले फेल नै गरिदेओस् । तँ आफ्नो सपनालाई कहिल्यै नबदल्नु ।’
‘तर आमा मैले आफ्नो लेख बदलिन भने टिचरले मार्क्स दिनुहुन्न । अनि आमाले भनिन् ‘तिम्रो टिचरलाई गएर भनिदेउ कि उनी आफ्नो मार्क्स आफ्नो ठाउँमा राखोस् र मेरो आफ्नो सपना म आफ्नो ठाउँमा राख्छु ।’ आमाको सुझावपछि अर्को दिन बच्चा स्कुलमा गयो र आमाको सुझाव सरलाई सुनायो ।
पच्चिस वर्षपछि त्यस बच्चाले अरबबाट पचास वटा घोडा किन्यो, दश करोडको महल बनायो, स्वीमिङ्ग पुल बनायो, कार किन्यो र सात वटा फ्याक्ट्री पनि खोल्यो । त्यो फ्याक्ट्रीको उद्घाटनको लागि फिता काट्न त्यो बच्चाले उनै टिचरलाई बोलायो । टिचरलाई यो मानिस त्यही आफ्नो पुरानो सानो विद्यार्थी थियो भन्ने थाहा थिएन । जब टिचरले फिता काट्यो र हातमा माइक्रोफोने दियो अनि भन्यो सर ! तपाईं आफ्नो सपनाको बारेमा केही भनिदिनुस् ।
टिचरले भन्यो ‘हेर सपना देख्नु एकदम राम्रो कुरा हो, हरेकले सपना देख्नुपर्दछ । ठूलो ठूलो सपना देख्नुपर्दछ । म यो युवकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसले ठूलो सपना देख्यो ।
सबैले ताली बजाए र त्यो युवक (बच्चा) माइक्रोफोन हातमा लियो र भन्यो ‘म आफ्नो परिचय त दिउँ, म त्यही बच्चा हुँ जो पच्चिस साल पहिले तपाइँको अगाडि लेख लिएर आएको थियो र तपाइँले भन्नुभएको थियो, यो सपना कहिल्यै पूरा हुन सक्दैन । फेरि तपाइँले भन्नुभएको थियो म मार्क्स दिन्न । अनि मैले भनेको थिएँ कि तपाईं आफ्नो मार्क्स आफ्नो ठाउमा राख्नुस् र म आफ्नो सपना आफ्नो ठाउँमा राख्छु । म त्यही युवक हुँ सर !
टिचरको आँखामा आँसु आयो र माइक्रोफोन हातमा लिँदै भन्यो ‘म आज केही भन्न चाहन्छु, मैले यस्तै हजारौं केटाकेटीहरुलाई डिमोटिभेटेड गरेको छु, उनीहरुको सपनालाई बर्बाद पारेको छु, हजारौं सवाल छन् किनकी मेरो आफ्नै सपना पूरा भएन ।
तपाइँको सपना बर्बाद् गर्न लागिरहेको कोही छ भने, त्यो एउटै व्यक्ति हो, जसले आफ्नो सपना पूरा गर्न सकेन । त्यसैले अरूले हिँड्न नसकेका बाटाहरू उनीहरूका लागि असफल हुन सक्लान् तर तपाइसँग त्यो बाटो पार गर्ने सपना छ भने आवस्य तपाइँ ती बाटोको सफल यात्री बन्नु हुनेछ ।
थोमस एल्वा एडिसन कुनै दिन असलफलताका उदाहरण थिए । आइन्स्टाइन लठेब्रे थिए । सन्त कविर सडक बालक थिए । रामतिर्थ स्वामी एक गरिब थिए । तर अरूसँग जे छ त्यो उनीहरुसँग थिएन तर अरूसँग जे थिएन त्यो मजवुत सपना उनीहरूसँग थियो । र उनीहरूले खुसी र सफलता बटुले ।
तपाईँ जहाँं हुनुहुन्छ, नेपालको कुनै गाउँ, सहरमा, अरबको मरूभुमिमा अस्ट्रेलिया वा अमेरिकामा । तपाईँसँग केही छ वा केही छैन बरू एउटा सुन्दर सपना र त्यसलाई प्राप्त गर्ने समय र योजना साथ राख्नुहोस् । आत्मपहिचान, सपना, योजना र निरन्तरताको समिकरण नै सफलता हो ।
संस्कृतमा एउटा श्लोक छ, अल्छिलाई विद्या, मुर्खलाई धन, निर्धनलाई मित्र र अमित्रलाई सुख हुँदैन ।
‘अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम्,
अधनस्य कुतो मित्रम्, अमित्रस्य कुतः सुखम्’